G uangzhong Aiweidy Lighting Acoustics Equipment Co, Ltd, dia ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra sy ny fanompoana ny matihanina jiro sy ny feo teo amin'ny kianja filalaovana ny avo-teknolojia orinasa Company Faritany Baiyun District de Guangzhou City, nanarona 15 Acra, fanorenana faritra ny 25000 ^ M. Garden zavamaniry, haingo ny loharano ao anaty dobo. 700 M ^ 2 orinasa amin'ny manan-tsaina multi-Functional Studio, mihoatra ny 1,000 metatra tora-droa ny birao maoderina toerana.
C ompany tsy manana fitaovana famokarana mandroso, fa koa maro avo-tsara, ny teknolojia avo, matihanina injeniera sy ny fanatsarana ny matihanina sy ara-teknika manokana, maro ny mazoto, ny firaisan-kina tsara tehina.
A iweidy entana manana laza tsara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, indrindra noho ny fihetsehan'ny lohany jiro, jiro LED jiro sy ny ivelan'ny trano. Ankehitriny, ny vokatra dia naondrana any Eoropa, Azia Atsimo, Moyen-Orient, Amerika Avaratra sy Atsimo ary ny hafa firenena sy ny faritra. Mijery mialoha, ny mpiara-miasa rehetra Aiweidy mitantana ny pinoany ny kalitaon'ny aloha, asa fanompoana voalohany, fanavaozana ny voalohany na ny fitokisana aloha tahaka ny amin'ny mandrakariva ny hanompo mpanjifa sy ny namany avy ao an-trano sy any ivelany.